Nyika dzekutanga dzaigona kutenga iyo iPhone 7 munaGunyana 16 | IPhone nhau
Maka zuva pakarenda: nyika dzekutanga dzinogona kutenga iyo iPhone 7 munaGunyana 16
Kunyangwe isu takatotaura pamusoro peguhu zhinji dzinoita kuti titarisire zvishamiso zvishoma masikati ano, chinhu chechokwadi ndechekuti hurukuro inokosha ichaitwa masikati ano. Kana pasina zvekushamisika, mumaawa anenge matatu iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus uye pamwe Apple 2, asi tinogona kutenga riini zvishandiso? Zvakanaka, maererano iPhone Italy, svikiro rakaburitsawo mifananidzo yemabhokisi eiyo anotevera 4.7-inch iPhone, nyika dzekutanga dzichakwanisa kuitenga. kubva munaGunyana 16.
Chinhu chekutanga chinobata pfungwa dzebhokisi pane izvo zvatisingaone: zvinoenderana nekudonha kwakapfuura, Apple ingadai yakaisa mufananidzo weiyo iPhone kubva kumashure kumberi kwebhokisi, kufamba kunoshamisa kwaizotsvaga kusiyanisa iwo mabhokisi kubva kune eiyo iPhone 6s. Chero zvazvingava, zvinoita sekunge ndiwe mabhokisi asina mufananidzo vanoenda zvakanyanya nenzira yekuita zvinhu zvaTim Cook nekambani.
Unogona kutenga iyo iPhone 7 kubva svondo rinouya ...
… Asi mune nyika dzipi? Sezvatatotaura pane dzakasiyana nhambo, kutanga nyika dzine rombo rakanaka ndiani achakwanisa kutenga iPhone 7 ichave yakajairwa, ayo ari United States, Australia, China, United Kingdom nedzimwe nyika. Zvingangodaro, veSpanish neLatin America vachiri kufanira kumirira mamwe mavhiki mashoma.
Kunyangwe isu tichiri kuzofanira kumirira kuti titsigire misi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti nguva dzakatarwa dzinoenderana: nhasi iyo iPhone 7 / Plus inoratidzwa, muvhiki rimwe chete, iyo Nyamavhuvhu 14 yaizoburitswa iOS 10 zviri pamutemo (kuchave neGolden Master kune vanogadzira masikati ano?) uye neChishanu manheru vhiki yekutanga yekutengesa ichamiswa sezvavakaita mumakore achangopfuura.
Saka, maka musi waSeptember 16 pakarenda, kunyanya kana iwe uchigara mune imwe yenyika idzo dzinowanzo kuve muboka rekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Maka zuva pakarenda: nyika dzekutanga dzinogona kutenga iyo iPhone 7 munaGunyana 16
Ndinovimba kuti nekuvhurwa kwechitoro MuSanta Fe muMexico City musi waGunyana 16, vachatipa kushamisika kwekuitenga musi iwoyo iwoyo!
Apple Tarisa 2 skrini muvhidhiyo: yakatetepa uye ine yakadzika midzi NFC